फेरी के भयो लक्ष्मी गदाललाई ? विवाहवारे प्रश्न गर्दा हात जोडेर गरिन् यस्तो बिन्ती (भिडियो हेर्नुस्) – Dailny NpNews
फेरी के भयो लक्ष्मी गदाललाई ? विवाहवारे प्रश्न गर्दा हात जोडेर गरिन् यस्तो बिन्ती (भिडियो हेर्नुस्)
प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ १९, २०७८ समय: १६:१४:५२
लक्ष्मी गदाल र अभिनेता किशोर गदाल प्रेमी प्रेमीका हुन् । यो कुरा अब कतै लुकेको कुरा होइन । उनीहरुले सार्वजनिक रुपमा यो कुरा स्वीकार गरेका छन् । लक्ष्मी र किशार केही वर्ष देखि संगै वस्दै आएका छन् । तर उनीहरुबीचको प्रेममा एउटा समुह आयो जसका कारण उनीहरुको सम्बन्ध विग्रियो । किशोरको दावी अनुसार लक्ष्मीलाई प्रयोग गरेर एउटा समुहले आफ्नो जिवन वर्वाद पार्न खोजेको थियो ।